» हेटौँडामा आई.पि.एम कृषक पाठशालाको समापन
हेटौँडामा आई.पि.एम कृषक पाठशालाको समापन
५ असार २०७६, बिहीबार १८:५०
मकवानपुर, ५ असार । पुर्वेली टोल आई.पि.एम. कृषक पाठशाला हेटौँडा १८ को समापन समारोह कृषक दिवस कार्यक्रम बिहीबार सम्पन्न भएको छ । आई.पि.एम. कृषक पाठशालाका अध्यक्ष बिन्दा बि.क.को अध्यक्षता तथा हेटौँडा उपमहानगरपालिका आर्थिक विकास शाखा प्रमुख दुर्गा प्रसाद न्यौपानेको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा हेटौँडा १६ का वडाअध्यक्ष रामकृष्ण कोईरालाको विशेष आतिथ्यता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा नविना पौडेल र सरस्वती तिमल्सिनाले स्वागत गीत गाएका थिए । १६ हप्तासम्म सञ्चालन भएको कृषक पाठशालाको सरस्वती तिमल्सिनाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा दोहोरी गीत प्रस्तुत गर्नुका साथै पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र समेत वितरण गरिएको थियो । १६ हप्तासम्म चलेको उक्त पाठशालाको प्रशिक्षण धर्मराज तिमल्सिना र रामप्रसाद तिमल्सिनाले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा वडा नम्बर १६ का वडा सदस्य सरस्वती चौँलागाई, मिठु बिक, हिमचुलीको कृषि सहकारी संस्थाका कोषाध्यक्ष जितबहादुर खड्का लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।